11 / 07 / 2021 11 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 279 Views စာ0မှတ်ချက် 71747 The Keepers '' ကျေးရွာ, နဂါး, ဂျေး, Lego, Lego Ninjago, Ninjago, nya, ကြော်ငြာအတို, အဆိုပါကျွန်း, YouTube ကို
အဆိုပါ Lego Ninjago vlog စီးရီးသည်ဇာတ်လမ်းတွဲလေးခုနှင့်အတူပြီးဆုံးသွားသော်လည်းဖြစ်သည် Lego နည်းပညာအသစ်သည်အနာဂတ်တွင်ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုလှောင်ပြောင်သလား။
အဆိုပါ Lego လှုပ်ရှားမှုအစစ်အမှန်များကိုကာတွန်းရုပ်ပုံအသေးစားများနှင့်ရောစပ်ထားသောအုပ်စု၏နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုသည်ရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ် CGI အုတ်များကိုရပ်တန့်ရန်အသုံးပြုသူများအတွက်အတွေ့အကြုံသစ်ဖြစ်သည် Ninja Vlogs တွေရဲ့စီးရီးတွေဟာအခုထက်အနည်းငယ်ပိုပြီးသွားပါပြီ ကန ဦး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် စတုတ္ထဇာတ်လမ်းတွဲနှင့်အတူအကြံပြုခဲ့သည်။ ထုံးစံအတိုင်းမင်းကိုကြည့်ရှုရန်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းသည်။
ဤဗီဒီယိုများနှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသူများအတွက်သူတို့သည်နောက်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးလှိုင်းတံပိုး မှနေ၍ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကျွန်းကိုစူးစမ်းနေသည့်ညနှင့်ဂျေးတို့၏ပုံပြင်ကိုပြောပြကြသည်။ ငြိမ်မော်ဒယ်များမှသည်ရိုင်းနဂါးများအထိ Lego Group မှဤသည်သရုပ်ပြခဲ့သည် နည်းပညာအသစ် လေး Ninja ကို vlogs ၏ပုံစံ၌တည်၏။
နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်ဖော်ပြချက်က၎င်းသည်အကြံပြုသည် Lego Group သည်ဤကာတွန်းပုံစံအသစ်ကိုထပ်မံလိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည်၊
ဒီစိတ်ကူးကိုအနာဂတ်ရာသီများအထိတိုးချဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါပြီ Ninjago သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာများပင်။ ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အဲဒါကနေအထိဖြစ်နိုင်တဲ့ဗီဒီယိုများနှင့်အတူအချို့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်စေသည် Star Wars သို့ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်.
သင်နှင့်အတူ Ninja Vlog များကိုထပ်မံဖန်တီးနိုင်သည် အသစ်အစုံ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအထူးအာရုံစိုက် 71747 The Keepers '' ကျေးရွာအရာကျွန်တော်တစ် ဦး အတွက်ကိုယျ့ကိုယျကိုစူးစမ်း အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်.
← နောက်ဆုံးပေါ် LEGOLAND အပန်းဖြေစခန်းသည်ဆောက်လုပ်သူများအားကြိုဆိုသည်
LEGO Games developer TT Games ကိုရောင်းချရန်မလိုတော့ပါ →